Hoy Andry Rajoelina : Hiditra magistrat ianao, ny ankamakoroany dia tsy maintsy mandoa kolikoly vao tafiditra magistrat – lors du débat avec Marc Ravalomanana | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Harimisa Noro VololonaHoy Andry Rajoelina : Hiditra magistrat ianao, ny ankamakoroany...
Harimisa Noro VololonaNEXTHOPERANARISON TsilavoSEM Andry RAJOELINATarif de la corruption lors des examens des magistrats
Hoy Andry Rajoelina : Hiditra magistrat ianao, ny ankamakoroany dia tsy maintsy mandoa kolikoly vao tafiditra magistrat – lors du débat avec Marc Ravalomanana
ADY AMIN’NY KOLIKOLY
Afa-po amin’ny asan’ny bianco ve ianareo Andriamatoa filoha isany? Raha misy tokony ho hatsaraina, inona no hatsaraina, raha misy tokony hanohanana azy, amin’ny lafiny inona ? Président ?
Andry Rajoelina: ny ady amin’ny kolikoly dia tsy maintsy ho atao, ary ho ataoko ho laharam-pahamehana. Miainga izany any amin’ny fanaovana concours aloha, na fifaninana, na io hiditra polisy na zandary na mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny. Manontany tena isika hoe maninona moa no misy tsy matoky, tsy izy rehetra fa ny ampahany amin’ny fitsarana, ny mpitsara no voaroaka. Ny antony dia na ny fidirana any amin’ny ENAM ohatra fanta-poko fanta-pirenena fa any dia efa miantomboka ny kolikoly. Rehefa hiditra mpiasam-panjakana ianao, tsy maintsy mandoa vola vao voaray ho mpiasam-panjakana. Hiditra magistrat ianao, ny ankamaroany tsy maintsy manao kolikoly vao tafiditra magistrat. Amin’ny fomba ahoana moa no ahafahan’izy ireo mamerina ny investissement satria mitady vola izy. Ao ny mivarotra tany, ao ny mivarotra fiara, izay vao tafiditra mpiasam-panjakana, na tompon’andraikitra ambony eto anivon’ny firenena. Izaho izany dia manome toky aloha voalohany, fa ho ataoko mangarahara tanteraka daholo ny fifaninanana rehetra rehetra hidirana mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny eto Madagasikara. Be dia be, tamin’izaho nitety faritra, fa na hatramin’ny olona hiditra sage-femme aza, dia niteny: izahay hoy izy Mr Le Président hangatahana dix million, deux millions d’ariary, aiza no ahitanay deux million d’ariary? Izany no tena mampikaikaiky mampijaly ny vahoaka mihitsy. Mikasika ny bianco, mila hamafisina, hamafisina bebe kokoa ny fisin’ny bianco io. Tokony mielim-patrana io, tena makany amin’ny rantsa-mangaika rehetra rehetra, asiana rantsa-mangaika satria io kolikoly io tsy eto an-drenivohitra ihany na an-tanandehibe ihany, ka tokony misy dénonciation atao ho an’ny olona rehetra rehetra izay voakasiky ny kolikoly hamafisin’ny bianco, dia omena ahalalana tanteraka mihitsy ny bianco. Misy zavatra tokony hatsaraina aloha ao. Izaho mahita hoe fa tokony eo anivon’ny bianco ihany dia efa afaka asiana ny fitsarana satria ry zareo anie manao enquette e, fa tsy alefa eny enivon’ny tribonaly fotsiny intsony, fa eo anivon’ny bianco mila hatsaraina ny rafitra mba ahafahantsika miady amin’ny kolikoly manerana an’i Madagasikara.
Misaotra tompoko, Président Ravalomanana, ady amin’ny kolikoly, bianco, hatsaraina ve?
Ravalomanana: ny atao hoe kolikoly an dia tokony ho fantatra tsara aloha ny definition-ny. Ny atao hoe kolikoly dia fifanarahana olona roa na telo miafina, izay tsy mitondra zavatra tsy mahasoa amin’ny vahoaka, misy zavatra miafina anankiroa hifanarahana eo, olona roa, dia ireny olona ireny manao zavatra tsy mety, izay manimba ny fiaraha-monina na ny tombontsoa iombonana, izay ny corruption. Fa na izany aza, azo atao tsara aloha ny mampanao azy hoe manao communication aloha isika, communiquer-nareo hoe izao ny zavatra misy, eto, be ny kolikoly eny amin’ny zandarimaria, be ny kolikoly eny amin’ny fitsarana, be ny kolikoly ohatran’izao, dia hampanaovina azy ilay communication, dia rehefa avy eo hampanaovina formation izy na education, former-na aloha izy, izao avy ny zavatra tsy azonareo atao. Iza no mandà anareo fa tsy ireo olona any Amerika ireo na any Etats-Unis ireo na any Frantsa ireo tsy mandray an’ilay commission, ohatra izao ny banque mondiale raha mitondra kadô dia tsy mahazo mihoatra ny 20 dollars ny cadeau omenao ahy, mba limiter-na hoe ity no azonareo atao dia tsy kolikoly izy amin’izay fotoana izay fa mba kadô. Dia ohatran’izany koa, atao aloha izany ny communication, dia omena ilay education ho azy, izao ilay izy, dia rehefa avy eo sanctionner-na izy raha to ka tsy mety. Izay no tokony hitondra azy io. Namorona ny bianco volaohany teto Madagasikara ny tenako, ary niasa niaraka tamin’ny expert avy any ivelany hoe ahoana ny tokony azo atao. Ny firenena tena tsara indrindra eto izao amin’ny ady amin’ny kolikoly dia ry zareo Norvezianina. Dia izay izany no tiako horesahana hoe ny bianco aloha, ny mpiasan’ny bianco izany tsy atao hampitahotra, fa tokony miasa miaraka amin’ny mpanao communication. Ny bianco raha vao manidy trano fa tsy miasa miaraka amin’ireo mpanao gazety sy mpanao camera ireo, misy foana io, fa ianareo mpanao gazety mpikarakira io, mahita zavatra tsy hitan’ny olona ianareo. Dia amin’izay izany hoe tandremo tsara fa raha ity no ataonao dia corruption izay, fa raha ity no ataonao kadô. Izy ary hiteny tonga izao ny voalohan’ny taona ho izy na tonga ny krismasy 25 Desambra, tsy dia hanome kadô anao ve izy nefa hita hoe 25 desambra? Azo atao ny manome kadô fa mba latsak’izao. Fa ny an’ny sasany tsy kadô insony, izay izany no atao azy. Dia asiana fanamboarana io, haiko io ry vahoaka malagasy. Mino ianareo ahy fa raha tsy vita io kolikoly io, tsy azo…
[cool-timeline layout= »default » designs= »default » skin= »default » category= »dapres-larticle-6-du-cpp-et-larticle-181-de-la-loi-2003-036-la-victime-directe-dun-abus-de-biens-sociaux-est-la-societe-et-non-le-simple-associe » show-posts= »10″ order= »DESC » icons= »NO » animations= »bounceInUp » date-format= »default » story-content= »short » based= »default » compact-ele-pos= »main-date » pagination= »default » filters= »no »]
Previous articleMadagascar, il faut que le prochain gouvernement mette fin aux violations des droits humains d’après AMNESTY International
Next articleLa plupart des magistrats à Madagascar ont payé leur admission d’après le candidat à la présidentielle, ancien Président de la transition, Andry Rajoelina